Home Wararka Kulankii MW Deni Iyo Agaasime Diyaano oo fashil ku soo dhamaaday
Kulankii MW Deni Iyo Agaasime Diyaano oo fashil ku soo dhamaaday
Warar lagu kalsoonaan karo oo la helayo ayaa sheegaya inuu Is-faham la’aan kusoo dhammaaday kulankii dhexmaray Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Agaasimihii xilka qaadista lagu sameeyay ee PSF Maxamuud Cismaan Diyaano.
Kulanka oo ahaa mid albaabada u xirnaayeen ayaa waxaa la sheegay in la isku fahmi waayay qodobadii looga hadlaayay, isla markaana lagu kala tegay, iyada oo kulankaas Agaasime Diyaano ku wehlinaayeen Isimo uu hoggaaminayo Boqor Burhaan Boqor Muuse.
Wararka ayaa intaas waxaa ay kusii darayaan in Madaxweynaha Puntland Saciid Deni uu kulanka inta uu socday uu Agaasimihii uu xilka qaadista ku sameeyay ee Maxamuud Cismaan ka codsaday inuu marka hore aqbalo xilka qaadista, uuna wareejiyo xilka.
Guddiyada Soo Xulaya Ergada Doorashada Kuraasta Magaalada Boosaaso Oo La Shaaciyay
Dhageyso:- Barnamijka Wareegga Wararka 24-Ka Saac Ee Radio Dalsan 01/03/2022
Madaxweynaha Galmudug Oo Diray Baaq Ku Aaddan Abaaraha
Ilo-wareedyo lagu kalsoonaan karo oo soo xigtay Isimo ka qeyb ahaa kulanka ayaa tilmaamay in Agaasime Diyaano uu kasoo horjeestay Codsiga uga yimid Madaxweyne Deni ee ahaa inuu xilka wareejiyo, si loogu fuliyo wixii uu rabo.
Maxamuud Cismaan Diyaano ayaa dhankiisa dalbaday in Madaxweynaha Puntland uu aqbalo go’aankii u dambeeyay ee soo saareen Isimada Gobolka Bari, kadibna la xalliyo wixii khilaaf ah ee jira, wuxuuna Go’aankaas ahaa in Diyaano loo daayo Agaasimaha PSF.
Si kastaba waxaa dhowr jeer fashilmay isku dayo lagu doonayey in lagu xaliyo khilaafka ka dhashay xilka qaadistii uu Madaxweynaha Puntland Saciid Deni ku sameeyay Agaasimihii Ciidanka PSF, iyadoona arrintaas ay sababta dagaal khasaaro badan dhaliyey.
Previous articleAl Shabaab oo xalay weeraray qaybo kamida magalaada Muqdisho
Next article[Daawo] Guddiga loo xil-saaray qiimeynta Garbahaarey oo war soo saaray
Farmaajo oo abaabul mudaharaad saakay ka bilaabay Gobolka Gedo
Shil khasaare dhimasho & dhaawac sababay oo ka dhacay duleedka magaalada...